Sababaha ugu badan ee walbahaarka ku keena bisadaha | Bisadaha Noti
Sababaha ugu badan ee walbahaarka ku keena bisadaha
Bisaduhu ma jecla isbeddellada haba yaraatee; si aad u badan oo ay u dareemi karaan xumaan, xitaa iyadoo niyad-jabsan. Si kastaba ha noqotee, xawaaraha nolosheena awgood, mararka qaarkood waa lama huraan inaan dareemo culeys. Taasi diiqada waxaan u qaadnaa guriga, halkaasoo saaxiibkeen dhogorta badani nagu sugi doono.
Ilaa aynaan qaadno tallaabooyin aan ku yareyneyno, ugu dambeyn bisadeena sidoo kale xoogaa xiisad bay dareemaysaa. Aynu ogaanno sababaha ugu badan ee keena walbahaarka bisadaha iyo waxa aan sameyn karno si aan mar labaad ugu faraxno.
1 Dhakhtarka xoolaha
2 Imaanshaha xubin qoys cusub
3 Dad ama duunyo wixii hadda ka dambeeya
Imisa jeer ayaan diyaarinay si aan u geyno dhakhtarka xoolaha oo uu ku hoos qarsaday sariirta hoosteeda? Qaar badan, sax? Aadida meel ay ku baarayaan iyo / ama siinayaan talaal, haba yaraatee ma jecla. Sidoo kale wadayaashu ma awoodaan. Si aan isugu dayin inaadan ka dhigin mid aad u xun, waxaan kugula talinayaa inaad isticmaasho Buufinta buufinta bisadda taasi waxay ka caawin doontaa inay is dejiyaan.
Imaanshaha xubin qoys cusub
Marka qoysku sii kordhayo, bisadeena waxay dareemi kartaa raaxo daro. Sidaa darteed, haddii ay tahay xayawaan kale oo afargeesle ah (mid kale) bisad ama a eyga), Soo bandhigida waa in si sax ah loo sameeyaa si looga fogaado dhibaatooyinka.
Haddii ay tahay ilmo, waxaa lagugula talinayaa inaad u ogolaato inuu waqti la qaato. Kaliya sidan oo kale ayaan iska ilaalin doonnaa inaan kuu aragno inaad tahay qof soogallay.
Dad ama duunyo wixii hadda ka dambeeya
Bisaduhu si wanaagsan uma aqbalaan isbeddelada, ha noqdaan kuwo togan ama kuwo taban. Intaas waxaa sii dheer, waa in lagu xisaabtamo inay saaxiibo dhow la noqon karaan dadka kale iyo xayawaannada kale, ilaa heer marka ay joojiyaan joogitaanka guriga, waa la adkeyn karaa.
Waxa ugu fiican ee lagu sameeyo xaaladahan waa in lagu sii wado howsha iyo, wixii ka sarreeya, waqti badan la qaado dhogorta.
Ma ogtahay sababaha kale ee walaaca ku keena bisadaha?
Wadada buuxda ee maqaalka: Bisadaha Noti » Bisadaha » Riyooyin » Sababaha ugu badan ee walbahaarka ku keena bisadaha
Waa maxay cudurka loo yaqaan 'cat-tiger syndrome'?
Sida loo ogaado haddii bisad loo adeegsaday